DEG DEG: Qarax lala eegtay maqaayad ku taalla Muqdisho – Radio Muqdisho
Qarax loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay maqaayad ay dad badani ku jireen oo ku taalla ka soo horjeedka Hotelka Centeral ee magaalada Muqdisho.
Maqaayaddan oo Banooda lagu magacaabo ayaa la ag dhigay gaari walxaha qarxa ay ku jireen xilliga qadada, dad badan ayaa waxyeello ka soo gaartay sida ay sheegayaan dad goob joogeyaal ah.
Bishii February 20-keedii ayaa qarax ismiidaamin ah lala eegtay Hotel Central oo ka soo horjeeda maqaayaddan oo ku taalla degmada Boondheere, waxaa halkaas ku dhintay dad ka badan 30 qof oo ay ku jiraan masuuliyiin dowladda ka tirsan.
Shalay ayay kooxda Al-Shabaab magaalada Garowe ku qarxiyeen qaari ay la socdeen shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobay, waxaa halkaasi ku dhintay sideed qof.
Wixii warar ah ee ku soo kordha waan idinla soo socodsiin doonnaa.
C/kariim Xuseen Guuleed oo musharaxnimadiisa maanta ku dhawaaqay “SAWIRRO”
C/kariim Xuseen Guuleed oo musharaxnimadiisa maanta ku dhawaaqay "SAWIRRO"